Naya Drishti | बादललाई जिताउन हेटौडा आएका बास्कोटाको ट्विटले तरंग, भंग होला त एमालेको पार्टी एकता ? - Naya Drishti बादललाई जिताउन हेटौडा आएका बास्कोटाको ट्विटले तरंग, भंग होला त एमालेको पार्टी एकता ? - Naya Drishti
जेठ ०५, हेटौंडा । भोली हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको उप निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार राम बहादुर थापा बादललाई जिताउन हेटौडा आएका बास्कोटाको ट्विटले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।
हेटौंडा पुगेका बास्कोटाले गरेको ट्विटले राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको हो । ट्वीट गर्दै उनले भनेका छन्- बाग्मती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरिने चुनाबको मानिसहरु काउण्ट-डाउन गर्न थालेका छन । तर त्यो भन्दाबढी देशको सबभन्दा ठलो पार्टी एमालेको सुरक्षित जीवनको चासो चै सोकारवालाले राखेको सत्यको कसीमा विश्लेषण गर्नु बस्तुनिष्ठ हुने पक्का हुन्छ है।
हिजो मात्रै माधब नेपालको सचिवालयले बादललाई गर्ने खालको सहमति नभएको बताएको थियो । माधब समुहले कांग्रेस माओबादि समाजवादी संग मिलेर खिमलाल देवकोटा लाई राष्टिय सभाको उम्मेद्वार बनाएको छ । माधब समुहले यदि एमालेका उम्मेदवार बादललाई मतदान गरेन र बादलले हारे भने एमालेको एकता समाप्त हुने बास्कोटाको संकेत छ ।
राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनका लागि गृहमन्त्री रामवहादुर थापा वागमति प्रदेशका एमालेका शीर्ष नेतासहित हेटौंडा आइपुगेका छन् । विहीबार हुने मतदानको पूर्वसन्ध्यामा बादल बुधवार हेटौंडा आएका हुन् । एमाले वागमती प्रदेशका इन्चार्ज समेत रहेका बादलसँगै सह-इन्चार्ज तथा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, प्रदेश कमिटी अध्यक्ष आनन्द पोखरेल, पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा लगायतका नेता हेटौंडा आएका छन् ।
बादलले यहाँ पार्टीका नेता र एमालेका मतदाताहरुसँग छलफल गरेका छन् । राष्ट्रियसभाका लागि विहीबार विहान ९ बजेबाट मतदान हुँदैछ । यसैबीच एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले वागमती प्रदेशमा विहीबार हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणामले एमाले एकता जोगिने वा टुट्ने निधो हुने संकेत गरेका छन् ।
त्यस्तै आज नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार हुने राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापा बादललाई मतदान गर्न अपील जारी गरेका छन्। उनले नेता बादलको विजयले कम्युनिष्ट आन्दोलनको भावनात्मक एकतामा समेत बल पुर्‍याउने उल्लेख गरेका छन्।
‘जेठ ६ गते वागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदमा कमरेड रामबहादुर थापा हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । उहाँको विजयले कम्युनिष्ट आन्दोलनको भावनात्मक एकतामा समेत बल पुर्‍याउने छ । तसर्थ, यस निर्वाचनमा एकतावद्ध भएर आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउनु हुन आग्रह गर्दछु’, ओलीले अपीलमा भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु, लाखौँ जनताको हृदयमा रहेको निर्वाचन चिन्हलाई अवमूल्यन गर्नु र पार्टी निर्णयको विपक्षमा उभिएर मत खसाउने जस्ता विषय एमाले पार्टीमा कल्पना बाहिरको कुरा रहेको बताएका छन्।
उनले एमाले भएर एमाले उम्मेदवारलाई मत नदिने विषय क्षमायाेग्य नहुने चेतावनी पनि दिएका छन्। ‘यस्ता प्रवृत्ति बहुदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुनै पनि पार्टीका लागि समेत स्वीकार्य या क्षम्य हुनै सक्दैनन्’, ओलीले चेतावनीको शैलीमा भनेका छन्।
एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले बादललाई मतदान गर्न नसकिने बताएको छ। आफ्नै पहलमा डा. खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवारी दिन लगाएकोले त्यसमा अन्यथा गर्न नसकिने नेता नेपालले बताएको मंगलबार साँझ उनको सचिवालयले वक्तव्य जारी गरेर प्रष्ट पारेको थियो । तर ओलीले एमालेको आधिकारिक उम्मेदवारलाई मत नदिए क्षमा गर्न नसकिने चेतावनी दिएका हुन्।
‘हामी सबै जनप्रतिनिधिहरु पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हौँ। पार्टीका सयौँ कार्यकर्ताहरु र हजारौँ मतदाताहरुको अमूल्य मतबाट विजयी बनेर यस जिम्मेवारीमा आएका हौँ। निर्वाचन अभियानका क्रममा र विजयपछि पार्टी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरु जसरी पनि पूरा गरी छाड्ने छौँ भनेर हामीले जनतामाझ प्रतिवद्धता गरेका छौंँ। हामी सबैले पार्टी सदस्यता लिँदा, विभिन्न तहका जिम्मेवारी बहन गर्दा प्रत्येक पटक पार्टीप्रति वफादार हुने र पार्टीे हित विपरित काम नगर्ने सपथ लिई आएका छौँ। आफ्नै शपथ कुन स्वार्थ, के कारण वा कस्तो बाध्यताले हामी पालन नगर्ने बिन्दूमा पुग्छौँ? पार्टी जीवनमा यो अकल्पनीय हो, यसो हुनै सक्दैन’, ओलीले भनेका छन्।
‍’प्रत्येक चुनौतीपूर्ण घडीमा हामीले आफूलाई उम्मेद्वार बनाउने पार्टीको निर्देशनलाई पालना गर्नु, आफूलाई जिताउन अहोरात्र खट्ने कार्यकर्ताको भावनालाई सम्मान गर्नु र जनतामाँझ आफूले गरेका वाचाहरुप्रति हमेशा वफादार रहनु हामी सबैको कर्तव्य हाे’, ओलीले भनेका छन्।
उनले अग्रजहरुले अत्यन्त कष्टका साथ जन्माएको, हुर्काएको र जनताको माया एवम् विश्वासका जगमा यस बिन्दुसम्म आइपुगेको पार्टीलाई विभिन्न समयमा विभिन्न कोणहरुबाट कमजोर पार्ने प्रयासहरु पनि हुँदै आएका बताएका छन्।
ती सबै प्रयासलाई चिर्दै अहिले पार्टीभित्र देखा परेका समस्याको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि कार्यदल बनेर काम समेत सुरु भइसकेको ओलीले बताएका छन्। ‘यस निर्वाचनमा हाम्रो एकताबद्ध सङ्कल्प र सफलताले पार्टी एकतालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने छ। अतः यस निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वार माननीय रामबहादुर थापालाई सूर्य चिन्हमा मतदान गरी अत्यधिक मतले विजयी बनाउन आह्वान गर्दछु’, ओलीले भनेका छन्।